Home/टिप्स/दशैँमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, नत्र…
काठमाडौँ । दशैँ सम्पूर्ण नेपालीहरुको महान चाड हो । हामीलाई दशैँ भनेपछी निकै खुसि अनुभुति हुने गर्दछ। तर यसमा एउटा कुरा बुझ्नु आवश्यक छ कि दशैं भन्दैमा के गर्न हुन्छ के गर्न हुदैन ? दशैँलाई शुद्ध र शुभ बनाउन के गर्नु पर्दछ ?
आज हामी यहि विषय वस्तुमा आधारित रहेर कुरा गर्ने छौ। दशैँ जस्तो एउटा खास चाडमा हामीले कुन कुन कुरा गर्नु हुदैन त ?आउनुहोस् यसबारे जानकारी प्राप्त गरौँ :** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
१) कसैको अनादर नगर्नुहोस्ःदशैमा कसैको पनि अनादर नगर्नुहोस् सबैलाई सम्मान गर्नुहोस् चाहे आफु भन्दा सानो होस् वा ठुलो कसैलाई पनि फरक नछुट्याउनु होस् ।
२) भेदभाव नगर्नुहोस्ःदशैं को बेला मात्र नभई कुनै पनि बेला कसैलाई भेदभाव नगर्नुहोस् । किनकि दशैं सबै को उस्तै नहुन सक्छ तर दशैँ ले सधै मानिसलाई खुसि दिन्छ ।
३) झुटो नबोल्नुहोसःदशैं मा झुटो कुरा सके सम्म नबोल्नुहोस । यो दशैँ भनेको सत्य को बिजय हुने चाड हो त्यसैले झुटो कहिले पनि नबोल्नुहोस र झुटो को अनुसरण नगर्नुहोस् ।
४) मदिरा तथा धुम्रपान नगर्नुहोस्ःदशैँ को बेला मदिरा जन्य कुराहरु जस्तैः रक्सि जाँड नखानुहोस अनि चुरोट आदि इत्यादी जस्ता दुर्व्यशन को काम बाट मुक्त हुनुहोस । साथै स्वच्छ एवं ताजा खानपान गर्नुहोस् ।
५) हतार नगर्नुहोस्ःकुनै पनि काम गर्दा होस् अथवा तयारी गर्दा होस् यसबेला अलि सजग अनि सचेतना कासाथ काम गर्नुहोस् कहिँ जानु छ भने पनि हतार नगर्नुहोस् । हाम्रो बानी दशैँ तिहार मा कहिँ जानु छ भने एकदम हतार मा हुने बानी छ यो बानी बाट सके सम्म मुक्त हुनुहोस ।
६) जुवा तास नखेल्नुहोसःदशैँ मा रमाइलो को लागि भन्दै जुवा तास नखेल्नुहोस किनकि यसले विकृति निम्त्याउछ । यदि खेल्ने रहर नै भए पनि पैसा हालेर नखेल्नुहोस किनकि तपाई हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो पैसा को मुख कालो हुन्छ कतै न कतै यसले प्रभाव परिरहेको हुन्छ।
७) अनावश्यक खर्च नगर्नुहोस्ःदशैँ को बेला नेपाली हरु को बानी धेरै अनि अत्यधिक खर्च गर्ने बानी हुन्छ तर सके सम्म अनावश्यक खर्च नगर्नुहोस् किनकि तपाई को मेहनत को पैसा दशैँ को नाम मा फजुल गईरहेको हुन्छ। सधै एउटा कुरा ख्याल राख्नुहोस कि के यो खर्च गर्न उचित छ ? खर्च गर्नु भन्दा पहिले अलि चिसो दिमाख ले सोच्नुहोस।
८) गाली गलौज नगर्नुहोस्ःदशैँ को बेला कसैलाई गालि गलौज नगर्नुहोस् । हुन त अरु बेला गर्नुहोस् भनेको पनि होइन तपाईले सधै सभ्य अनि शान्त रहन सिक्नुहोस् ।
९) अरुलाई दोस नलगाउनुहोस्ःअरुलाई दोष दिने बानी एकदम नराम्रो बानी हो त्यसैले अरुलाई दोष नलगाउनुहोस नदिनुहोस सधै कुनै न कुनै घटना को पछाडी एउटा कारण हुन्छ त्यसकारण कुनै पनि घटना संग अथवा क्रियाकलाप सँग सम्बन्धित कुरा मा कसैलाई दोष नदिनुहोस् । त्यसमा तपाई पनि दोषी हुनुहुन्छ।
१०) निधार नखुम्च्याउनु होस् :दशैँ को बेला कतिलाई यो दशैँ समस्या को रुप मा पनि होला। हुने खाने र हुदा खाने हरु बीच मा दशैँ ले निकै भिन्नता ल्याउछ त्यसकारण तपाई सँग केहि चिन्ता वा निराशा छ भने पनि बाहिर हासिदिनुहोस। तपाई को मुस्कान नै तपाई को पहिले चिनारी हो अनि यहि मुस्कुराउनु नै चाड मनाउनु हो। सधै मुस्कुराउनुहोस् अनि कहिले पनि अध्यारो मुहार नबाउनुहोस्।
क ण्ड म को प्रयोग बिना ब च्चा नबस्ने गरी कसरी शा-री रिक सम्प र्क गर्ने ? डा. नुतनको सल्लाह भिडियो सहित